Xildhibaanada Kenya oo dalbaday in Madaxweyne Obama uu Khudbad ka jeediyo Baarlamaanka – Radio Daljir
Maajo 29, 2015 10:37 b 0
Jimco, May 29, 2015 (Daljir) — Xildhibaannada Baarlamaanka dalka Kenya ayaa doonaya in Madaxweyaha Maraykanka Barack Obama uu ka khudbadeeyo Baarlamaanka Hortiiisa marka uu soo booqdo Kenya bisha todobaad ee sanadkan.
Guddomiye ku xigeenka guddiga Ammaanka ee Baarlamaanka Kenya Fatuma Dullo ayaa warbaahinta dalkaas u sheegtay in xildhibaanada intooda badan ay dowladda ka doonayaan sidii ay u fududeyn lahayd in Obama uu la hadlo dhamaan Xildhibaanada dalka.
Waxaa kaloo ay sheegtay inay dalbanayaan inay ogaadaan Sababaha uu Obama Kenya u soo booqanayo, iyadoo sheegtay in madaxweynaha Maraykanka uu ka qayb-gali doono shir caalami ah oo looga hadlayo abuurista ganacsiyada yar-yar oo ay Kenya marti-galin doonto.
Fatuma Dullo ayaa tilmaamtay in Obama uu kulan gaar ah la yeelan doono madaxweyne Kenya, Uhuru Kenyatta oo ay ka wada hadli doonaan arimo la xriira amniga, tamarta iyo horumarinta xiriirka labada dowladood.
“Dowladdu waxa ay booqashadan uga faa’idaysan doontaa arimo ay kamid yihiin fursado maal-gashiyo oo ay hesho Kenya iyo waliba abuuridda xiriiro dhaqaale iyo mid ganacsi “ ayey tiri Ms Dullo oo u jawaabaysay xildhibaano su’aal ka keenay booqashada Obama.
“Argagaxisadu waa khatar caalami ah waxayna u baahan-tahay iskaashi wadajir ah, labada wadan waxa ay Arrintan ka Wadaagaan Argatiyo isku mid ah,\_” ayay mar kale tiri Dullu oo tilmaamtay in shirarka dhici doona laga soo saari doono qodobo muhiim ah oo lagu ciribtiryo xag-jirnimada.
Ugu dambeyn, booqashada Obama uu ku iman doono Kenya ayaa waxa ku baxaysa lacag dhan 60 milyan oo dollar ,lamana oga inta uu joogo in uu booqan doono guriga aabihis oo ku yaala degmada Kogelo ee dalkaas.